Dhacdo.com - News: Lamaane is-qabay oo ay kala geysay gabar xaafidal Qur’aan ah “Dhacdo Yaab Leh”
14,670,437 unique visits
Lamaane is-qabay oo ay kala geysay gabar xaafidal Qur’aan ah “Dhacdo Yaab Leh”
Kaltuun Axmed waa gabar Soomaaliyeed oo iminka ku nool wadanka Canada, isla-markaana waa hooyo heysata seddex caruur ah, iyadoo ay dhawaan kala tageyn saygeeda oo ay dhib iyo dheefba isla-soo wadaageyn.
Kaltuun Axmed ayaa saygeeda oo lagu magacaabo Ayaanle, kaga shakisay inuu xiriiro la-lee yahay dumar kale, hase ahaatee Ayaanle ayaa xaaskiisa aalaaba u sheegi jiray inuusan la-hadlin wax dumar ah, isla-markaana uu iyada oo kaliya jacel dhab ah u qabo.
Muddo kadib Kaltuun Axmed ayaa waxaa qaluubteeda gil gilay shaki iyo was-waas xoogan, iyadoo markii dambe xariir la-sameysay gabar ay saxibo ahaayeen, misana xaafidad Quraan ah, waxayna u sheegtay inay qaati ka taagan tahay ninkeeda, oo ay uga shakisan tahay haween kale.
Kaltuun saxibteed oo lagu magacaabo Ifraax, ayaa waxay ku tiri “Naa waxaas dhib malaha aniga ayaa ninkaaga soo kala ogaanaaya, inuu yahay nin naago jacel iyo in kale” sidii ayay Kaltuun ku qanacday.
Ifraax ayaa waxay u tafa-xeetaya sidii ay shukaansi ugu bilaabi laheyd Ayaanle, isla-markaana Ayaanle iskuma yaqaano Ifraax iyo Kaltuun, waayo waxay ku kala nool yihiin dalalka Canada iyo Maraykanka.
Ifraax ayaa maalin maal-maha kamid aheyd soo garaacday teleefankii guriga ee ugu jiray Kaltuun iyo Ayaanle, hase ahaatee sida uu qorshuhu ahaa ayaa waxay Kaltuun aaday magaaladda, isla-markaana waxaa guriga ku sugnaa oo kaliya Ayaan, halka caruurta laba kamid ah ay ku maqnaayeen iskuulka, halka midka kalana ay horey u sii kaxeysatay Kaltuun.
Iftaax ayaa dhawr jeer soo garaacday teleefanka guriga, waxaana ka qabtay Ayaanle, wada hadal kadib ayay Ifraax u sheegtay inay nambarka guriga kusoo qaldantay, halka Ayaanle uu taasi u arkay fursad, iyadoo ay halkaasi isku barteen.
Wuxuu siiyay teleefankiisa gacanta ah, xiriirkooda ayaa dheeraaday, waxayna caadeysteen inay is-dhahaan hadalada ay adeegsadaan sida laba qof oo uu wax ka dhaxeeyo tusaale ahaan “Qalbiga ayaa ku jacel, nafta ayaa ku tabeysa, kaama maarmo, had iyo jeer qalbiga baa kuugu haayaa, IWM.
Habeen habeenada kamid ah ayay Ifraax ka duubtay ereyada mac macaan ee uu lee-yahay Ayaanle, iyadoo Ifraax-na ay u gudbisay Kaltuun Axmed, halkaa oo uu ka bilowday buuqii iyo sawaxankii ugu xooganaa ee soo kala dhex galla qoyskaasi Soomaaliyeed.
Ayaanle ayaa wuxuu ku andacooday maxaad marqaati heysataa, oo aad ku ogaan kartaa inaan naago kale la-sheekeysto, halka Kaltuun ay dhageysiisay codkii ay kasoo duubtay Ifraax, isagoo ogaaday Ifraax inay ka socotay dhanka xaaskiisa, halkaa oo ay ku kala tageyn Ayaanle iyo xaaskiisa Kaltuun.
Fiiro Gaar ah: Waxaa wanaagsa in ragga ay mar walba daacad u ahaadaan haweenkooda, haddii kale waxaa dhici karta tanoo kale inay idinku dhacdo.
Wariye Xasan Cadde
Isha Dhacdooyinka Caalamka
Laacib on August 06 2010 14:00:52 ·
0 Comments · 4526 Reads